क्वारेन्टाइनका नेपाली कोरोनामुक्त | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौँ, ८ फागुन । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रकोप रहेको चीनको हुबेईबाट उद्धार गरी भक्तपुर खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको क्वारेन्टाइनमा राखिएका १७५ जना नेपालीमा कोरोना सङ्क्रमणको लक्षण देखिएको छैन ।
क्वारेन्टाइनमा बसेका सबैमा कोरोना लक्षण नदेखिएपछि खरिपाटीमा खुसी छाएको छ । क्वारेन्टाइनमा बसेका अभिभावक तथा आफन्तमा समेत यो खबरले खुसी छाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत चीनबाट उद्धार गरी ल्याइएका १७५ जना व्यक्ति कोहीलाई पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नदेखिएको प्रस्ट गरेपछि यस्तो खुसी छाएको हो । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका टोलीले आइतबार नेपालीको घाँटीको ¥याल सङ्कलन गरी परीक्षण गरेको थियो । परीक्षणका क्रममा १७५ जनाकै रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले सरकारले उद्धार गरी ल्याएका सबै नेपालीको कोभिड–१९ भाइरसको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जानकारी दिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नभएको जानकारी दिँदै सबै नेपाली भाइरस सङ्क्रमणमुक्त रहेको बताएका छन् । उहाँले क्वारेन्टाइनमा राखेको १४ दिनका दिन नाक तथा घाँटीको ¥याल निकालेर परीक्षण गर्ने जानकारी दिँदै त्यसको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको अवस्थामा क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपाललाई घर जान दिइनेछ । राष्ट्रिय प्रयोगशालाले सबैजनाको परीक्षण गर्न तीन दिन लगाएको थियो ।
प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झाले परीक्षणको पद्धतिबारे जानकारी दिएका छन् । उनले उद्धार गरिएको नेपालीको नमुनाहरूमा परीक्षण गर्दा कुनै पनि नमुनामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नभएको जानकारी दिएका छन् । नआत्तिन आग्रह प्रवक्ता श्रेष्ठले क्वारेन्टाइन स्थल वरपरका स्थानीयलाई नआत्तिन आग्रह गर्नुभयो । चीनमा कोरोना भाइरसको महामारी भएपछि गत फागुन ३ गते १७५ जना नेपालीलाई सरकारले उद्धार गरी क्वारेन्टाइनमा राखेको छ । त्यसक्रममा नेपालीलाई लिन जाने चालक दलका सदस्यसहित १७ जनालाई नगरकोटस्थित खानेपानी तालिम केन्द्रको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।
क्वारेन्टाइनभित्र रहेका नेपाली कोरोना भाइरसको रिपोर्ट कस्तो आउला भनेर कुरिरहेका थिए । क्वारेन्टाइनका प्रमुख डा. नवीन फुयालले कन्ट्रोल रुमबाट तपाईंहरूलाई बधाई छ, सबैजनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो भनेरका छन् । त्यहाँ रहेका नेपाली ताली बजाएर खुसी हुन थाले । एकले अर्कालाई अङ्कमाल गर्न थाले । विद्यार्थी धेरै उत्साहित देखिन्थे । डा. फुयालले क्वारेन्टाइनमा रहेका विद्यार्थीमा खुसीको सीमा नै नरहेको जानकारी दिए । “उनीहरू ठूलो परीक्षामा पास भएजस्तै गरी उत्साहित थिए,” डा. फुयालले थपे, ‘‘एक जनाको मात्र पोजेटिभ रिपोर्ट आएको भए १७५ जनामा नै तनाव हुने थियो । धन्न कसैको पनि पोजेटिभ रिपोर्ट आएन ।”
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षद्वारा निरीक्षण
यसैबीच राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले क्वारेन्टाइन निरीक्षण गरी त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिएको छ । भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले अध्यक्ष तिमल्सिना आएर विद्यार्थीसँंग पनि अन्तक्र्रिया गरेको जानकारी दिएका छन् । (गोरखापत्र दैनिकबाट)
काठमाडौ, २१ चैत । गरिबीका कारण रोजगारीका लागि भारत गएका नेपाली स्वदेश फर्किन खोज्दा नेपाल
काठमाडौँ, २१ चैत । नेपालगन्जको सीमा नाकामा अलपत्र नेपालीले भारतीय क्वारेन्टाइनमा जान अस्वीकार गरेका छन्।
कान्तिमा शङ्का गरिएका १४ बालबालिकामा कोरोना भाइरस देखिएन
काठमाडौँ, २१ चैत । कान्ति बाल अस्पतालमा कोभिड–१९ को शङ्का गरेर अहिलेसम्म १४ जना बालबालिकाको
एजेन्सी, २१ चैत्र । विश्व हरेक समाज महामारीको त्रासदीबाट गुज्रिएर आएका छन् । तर, महामारी सबै
एजेन्सी, २१ चैत । स्वरा भाष्करले गत वर्ष ब्वाईफ्रेन्ड लेखक हिमांशु शर्मासँग ब्रेकअप गरेकी थिइन्
धरहरा पुननिर्माण रोकियो
काठमाडौं, चैत २१ । सुन्धारास्थित पुननिर्माण जारी धराहरा परिसरमा एक साताअघि फरक दृश्य थियो ।